Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Italia » Diabe 3200 kilometatra mandefa indray ny fizahan-tany Slow Tourism
Travel Travel • Vaovao Mafana • Kolontsaina • Hospitality Industry • Vaovao farany Italia • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Aogositra 14, 2021
Ny lalana mankamin'ny fizahan-tany
Raha nanao dia nandritra ny 8 andro teny amin'ny Via Francisca an'i Lucomagno ny vondrona iray, vondrona iray hafa efa ho 2 volana no nankany Roma taorian'ny nandaozany an'i Canterbury. Ireo vondrona mpandeha an-tongotra 2 dia ampahany tamin'ny fizahan-tany miadana ao amin'ny "Road to Rome 2021. Atombohy indray!"
Nanatevin-daharana tao Pavia, renivohitra Lombard, ireo vondrona 2 hanangana indray ny fizahan-tany miadana.
Fitsangatsanganana 2 tena samy hafa misy tanjona iraisana ireto: ny fampiroboroboana ny dia - fizahan-tany miadana, amin'ity tranga ity fantatra ihany koa amin'ny hoe mandeha.
Ny fanatsarana ara-kolontsaina sy maharitra ireo faritany izay miampita ao anatin'io dia lasa malaza kokoa.
Niala tamin'ny toerana samy hafa ny vondrona tsirairay avy ary nivory tamin'ny talata 10 aogositra tao Pavia taorian'ny andro diabe. Ny vondrona iray dia misy mpikambana ao amin'ny AEVF, ny Fikambanana eropeana an'ny Vie Francigene, izay nisafidy ny hankalaza ny faha-roapolo taonany amin'ny dia 3,200 kilometatra. Ilay vondrona hafa dia nanao dia nandritra ny 8 andro namaky ny Via Francisca del Lucomagno - dia an-tongotra izay nampifandray ny farihin'i Constance ka hatrany amin'ny farihy Lugano ary ny faharoa nankany Pavia, rehefa avy niampita an'i Lombardy avy tany avaratra ka hatrany atsimo tamin'ny alàlan'ny valan-javaboary sy tranokalan'ny UNESCO. Ny Via Francisca del Lucomagno dia dia lavitra izay nampifandray an'i Eropa afovoany sy Roma.
Efa ela no mpinamana ireo zava-misy roa ireo, toy izany koa ny solontenan'izy ireo, ny filohan'ny AEVF Massimo Tedeschi, sy Marco Giovannelli ary Ferruccio Maruca (mpanoratra ny mpitari-dalana sy sekretera ny latabatra andrim-panjakana) ho an'ny Via Francisca del Lucomagno.
"Nalaminay manokana ny fialan'ny antokona mpitety fiangonana avy any Lavena Ponte Tresa (Varese), ny fijanonana italiana voalohany amin'ny Via Francisca del Lucomagno, mba hihaona amin'ireo mpivahiny ao ny lalana mankany Roma, ” Nanazava i Marco Giovannelli.
“Fotoana manamarika ny famerenana aorian'ny fotoan-tsarotra. Fizahan-tany miadana ary ny fandehanana an-tongotra dia mamela anao hiaina sy hankafy ireo faritany, ”hoy i Massimo Tedeschi naneho hevitra,“ raha jerena fa ny mpivahiny sy ity karazana fitsangatsanganana ity dia mampiroborobo ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny kolontsaina eropeana sy ny toekarena eo an-toerana. ”
Ny Via Francigena dia miainga avy any Angletera, izay misy ny "0 km" manoloana ny Katedraly Canterbury, hatrany Roma amin'ny faritra maro, anisan'izany i Frantsa sy Suisse ary manohy ny diany mankany Santa Maria di Leuca, (Puglia) finibus terrae , ny Italiana (faran'ny Tany), noho ny fihanaky ny Via Francigena atsimo. Ny fikambanana izay nampiroborobo azy nandritra ny 20 taona dia mankalaza ity fitsingerenan'ny andro nahaterahana ity amin'ny alàlan'ny fandehanana manontolo - dia lalana 3,200 kilometatra manerana an'i Eropa.
Ny Via Francisca del (an'ny) Lucomagno kosa dia manomboka any Alemana, ny marimarina kokoa avy amin'ny Lake Constance, avy eo mandalo ny Canton of Grisons sy ny Canton of Ticino (Switzerland), miaraka amin'ny andalana ihany koa ao Liechtenstein. Miampita ny Lucomagno Pass, izay ananany anarany, dia miditra any Italia avy eo amin'ny farihin'i Ceresio izy.
Avy eto no niaingan'ireo mpivahiny 10 avy any Trentino, Campania, ary Lombardy hanatevin-daharana ireo "mpiara-miasa" amin'ny Road to Rome.
Fotoana an'ohatra izay nanoritra indray ny fomba ananan'ity karazana traikefa ity, ireo lalana, ny olona eo afovoany. Ny fihaonana eo amin'izy ireo sy ny kolontsaina soloin'izy ireo raha mitondra angovo tena ilaina sy maharitra any amin'ny faritany lalovan'izy ireo no zava-dehibe. Mihobia amin'ny fanekena mendrika indrindra ny dia tsara sy ny fizahan-tany miadana amin'ny tsara indrindra.